” ဆုတောင်းမှားသလား ? အကြောင်းမှားသလား ? “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ” ဆုတောင်းမှားသလား ? အကြောင်းမှားသလား ? “
” ဆုတောင်းမှားသလား ? အကြောင်းမှားသလား ? “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 21, 2010 in Drama, Essays.. | 15 comments
ကျနော်ငယ်ငယ်ကလဲ သူလို့ဘဲ အဒေါ်တွေ အမတွေများတဲ့ မိန်းမကြီးစိုးတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။ ကျနော်အဖေက ကျနော်ကို အမြဲတမ်းမာမာထန်ထန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ကျနော်က တစ်ခါတစ်လေ သူပြောလိုက်ခိုင်းလို်က်တာကို မပွင့်တပွင့်နဲ့များပြောမိရင် ဖိနပ်နဲ့လှမ်းထုပြီး “ငဌေး ယောက်ျားလို ကျယ်ကျယ်ပြောစမ်း မင်းကိုငါယောက်ျားလေးမွေးထားတာ “လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ ကျနော်ကလဲ အခြောက်စိတ်လဲမ၀င်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ အမေအမအဒေါ်တွေကြားမှာ နေတော့ လူက နည်းနည်းတော့နွဲ့သလိုလို နုသလိုလိုတော့ ရှိပါတယ်။ခပ်အေးပေးနေချင်တာလဲပါ ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်းဇာတ်တွေအငြိမ့်တွေကို အဒေါ်အမတွေနဲ့ကြည့်ပြီးရင် ကျနော်က မင်းသမီးကတာကို သိပ်သဘောကျ။ အိမ်ကလူတွေကို ပြန်ပြီး မင်းသမီးလို ကပြ။အားလုံးကသဘောကျ လက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီး ကျနော်ကလဲ ပီတိတွေဖြစ်ပေါ့။ မှတ်မှတ်ရရပြောရရင် ကျနော် (8)တန်းအရောက် ကျနော်တို့ကျောင်း ကထိန်မှာ ကပွဲလေးထည့်ပါတယ်။ အတန်းထဲကဆရာမတွေကလည်းကျနော်ကို အငြိမ့်ခန်းမှာမင်းသမီးနေရာကခိုင်းပါတယ်။ကျနော်ကလဲ သဘောတူတာပေါ့။ အဲကျောင်းကပွဲကတဲ့နေမှာ ဆရာမတွေက ကျနော်ကိုအလှပြင်ဆိုင်မှာသွားပြင်ပေးပါတယ်။ အိမ်ကလူတွေကမှာလိုက်တာက ကပွဲပြီးရင် အိမ်ကိုဒီအတိုင်းပြန်လာခဲ့ နင်မိန်းခလေးလို ၀တ်လာတာကြည့်ချင်လို့ပေါ့။ ဒါနဲ့ဘဲ ပွဲပြီးတော့ အ၀တ်အစားမလဲဘဲ မင်းသမီးအ၀တ်အစားနဲ့ပြန်လာတာပေါ့။ အိမ်ထဲလဲ ၀င်လိုက်ရောအဖေ့ကို ရိပ်ခနဲ့တော့မြင်လိုက်ပါတယ် “ခွေးမသား”ဆိုတဲ့အသံကိုလဲအကြားလူလဲ ကြယ်တွေလတွေမြင်သွားပါတယ်။ ကျနော်အဖေက ကျနော်ကိုလက်သီးနဲ့ နှစ်ချက်ဆင့်ထိုးတာခံလိုက်ရတာပါ။ ပုံလဲသွားတဲ့ကျနော်ကို ခြေထောက်နဲ့ဆောင့်ကန်ရင်း “မိဘက ယောက်ျားစစ်စစ်မွေးထာတာကိုခွေးဇာတ်ခင်းတဲ့ကောင် “လို့လဲပြောလဲပြော ကန်လဲကန်ပေါ့။ တစ်အိမ်လုံးလဲ ဆူညံ။ ကျနော်ကလဲ “ကျနော်အခြောက်မဟုတ်ဘူး ယောက်ျား “လို့ငိုသံပါကြီးနဲ့ ပြန်အော်တာပေါ့ ရှက်တာကိုးဗျ။ ” ယောက်ျားဆို ယောက်ျားအလုပ်လုပ် ဘာလို့မိန်းမအလုပ်လုပ်လဲ“ဆိုပြီးထပ်ကန်ပါတယ်။ တစ်အိမ်လုံးပွက်လောရိုက်ပြီးဝိုင်းဆွဲမှ ပြီးသွားပါတယ်။
အဲဒီကစလို့ ကျနော်ကလဲ မာနနဲ့နေပါတယ်။အဖေကိုလုံးဝစကားမပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဖေထင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိအောင်ကျနော် လက်ဝှေ့ထိုးတာ သွားသင်ပါတယ်။ ညနေဆို စက်ဘီးမှာ အ၀တ်အစားထုတ်ကလေးချိတ်ပြီး မြန်မာ့လက်ဝှေ့သင်ပေးတဲ့ အကိုကြီး တွေဆီကိုညနေဆိုသွားပါတယ်။ နောက်မှပြန်ပြောလို့သိတာအဖေ့က ကျနော်များအဲလိုများထွက်သွားပြီဆိုရင် ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့မျက်စေ့တစ်ဆုံးလိုက်ကြည့်နေတတ်ပါသတဲ့။
ကျနော် လက်ဝှေ့သင်တာကို အမေတို့က မကြိုက်ပေမယ့်မတားရဲလို့ မတားပေမယ့် စင်ပေါ်ထိတက်မထိုးဘို့တော့တားပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း အဖေကိုယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းပြချင်လို့သာ သွားသင်တော့ စင်ပေါ်တက်ဘို့လောက်ထိတော့လဲ စိတ်မရှိပါဘူး။ ကျနော်က ရီးစားတွေဘာတွေထားတာတော့လဲ အဖေဘာမှမပြောပါဘူး။ကျနော်ကောင်မလေးနဲ့တွဲသွားတဲ့အချိန် တစ်ခါတစ်ရံအဖေနဲ့တိုးပေမယ့် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတတ်ပါတယ်။
အမေတို့ကိုတော့ “ နင့်တို့ကောင်က မိန်းမတော့ အစွံသား“လို့ပြောတတ်ပါသတဲ့။ ကျနော်ကလဲတစ်အိမ်ထဲသာနေတာ အဖေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိအောင် ရှောင်နေပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလူကို အထင်သေးတယ် ပေါ့။အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အဲဒီအချိန်တွေမှာအဖေ့ကိုမုန်းပါတယ်။ ကျနော်ကျောင်းနေတော့ အမတွေနေတဲ့ကျောင်းက အိမ်နဲ့နီးပါတယ်။ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးရောထားတဲ့နာမယ်ကြီးကျောင်း။ကျနော့်ကိုတော့ အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ ယောက်ျားလေးသီးသန့် ကျောင်းမှာသွားထားပါတယ်။ ကျောင်းသွားတော့လဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လမ်းလျှောက်လို့သွားရပါတယ်.။ နောက်အသားအရေကျပြန်တော့လဲအဖေက အညာသား အသားခပ်မဲမဲ။ကျနော်ကတော့ ခပ်လတ်လတ် အဒေါ်တွေက နင်ကမွေးစားသားကောက်ရတာလို့ စခဲ့တာနောက်ခဲ့တာကလည်း “ဟုတ်မှာဘဲ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုနှိမ်တာ”ဆိုတဲ့ အတွေးကို ပိုခိုင်မာစေလေလေ ပိုပို ပြီးနာကြည်းမိလေပါဘဲ။ အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် အဖေဆုံးသွားတာတောင် မျက်ရည်မကျမိဘူးခဲ့ဘူး။
တစ်ခါတော့ အဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးမြမောင်နဲ့ အလှူမှာတွေ့တော့ သာကြောင်းမာကြောင်းပြောကြရင်း လေးမြမောင်က
“ ငဌေးရ မင်းအဖေက မင်းဘ၀မှားပြီးရောက်မှာကို သိပ်စိုးရိမ်ရှာတာ ။ကျုပ်မှာသားလေးတစ်ယောက်ထဲပါတာ မိန်းမတောကြားထဲထားရတာ စိတ်မချဘူး။မိန်းမစိတ်ပေါက်သွားရင်တော့ ကျုပ်တော့ သေမယ်ထင်တာဘဲ လို့ပြောလိုပြော
မင်းမိန်းမလိုဝတ်ပြီး ပြန်လာတဲ့နေ့ကမင်းကိုထိုးနှက်ကန်ကြောက်ပြီးငါ့အိမ်ကိုလာငိုသေးတယ်။ချစ်လွန်းလို့လုပ်ရတာပါ ပေါ့ဆိုပြီးတော့။နောက်မင်းအိမ်ထောင်ပြုမယ်လဲဆိုရော ငါ့ဆီလာပြီး စိတ်ချပြီ စိတ်ချပြီဆိုပြီး ပြုံးပြုးံကြီးနဲ့လာကြွားတာကွ ငါတော့မျက်စေ့ထဲတောင်ပြန်မြင်သေးသကွာ”
လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကို ကြားမိတဲ့နေ့က အိမ်အရောက် ကလေးအဖေအလောင်းအလျာကျနော် ရှိုက်ကြီးတငှင်ငိုမိပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်အဖေဆုံးတာ သုံးလကျော်သွားပါပြီ။ ထွန်းလွင်လိုကောင်တွေမြင်တိုင်း၊နေရာတကာမှာ ယောက်ျားစင်စစ်က မိန်းကစိတ်ပေါက်လို့ ဘ၀မှားပြီးနေကြတဲ့သူတွေကို မြင်တိုင်းအဖေ့ကိုသတိရပါတယ်။အဖေသာမကယ်ရင် ကျနော်လဲသူတို့လိုဘ၀မျုိးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လေဗျာ။
ကျနော်ကိုပြောပြနေတဲ့ ကိုဌေး မျက်ဝန်းအစုံမှာမျက်ရည်စတွေက တွဲလဲခိုနေပါတယ်။
အတွေးပါးပါးလေးကို ဖတ်ပြီး အတွေးများများလေးရလိုက်ပါတယ်။
ဇတ်လမ်းလေး ကောင်းပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေလည်း လောကကြီးမှာ အများကြီး ဖြစ်တာတွေ မြင်နေရတာဆိုတော့.. ဘ၀သရုပ်ဖော် ဇတ်လမ်းလေးပေါ့။
အခြောက်မွေထိုင်းလက်ဝှေ့ကျော်တွေလည်း ရှိတယ်နော်။ သိုင်းသင်နေတိုင်းတော့ အဟုတ်မမှတ်နဲ့။ ဦးပေါက်ရဲ့ ငယ်ချစ်လေးလွင်က အခြောက်ဖြစ်ပြီး နတ်ကိုးကွယ်ပြီး ဝက်သားကြိုက်လို့ နတ်ရိုက်တာနေမှာ။
ကိုကြောင်ကြီးတော့ ပြောလိုက်မှဖြင့် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေကြီးပဲ
ကျုပ်ကတော့ ..ညီအကိုတွေချည်း..၀မ်းကွဲတောင် မိန်းမတော်တော်ရှားရှားပါးပါးဆိုတော့ .. ခြောက်တာ..စိုတာတွေမသိဘူးဗျ..။
အဲဒါနဲ့..ဒီလိုစဉ်းစားပါတယ်..။ ခြောက်တာရော..စိုတာရေ..။ မစို့တစိုရော… လုပ်ချင်တာလုပ်ကြ..။ဘာဖြစ်သလဲပေါ့..။
တီကောင်တွေလို အဖိုအမတွဲနေပြိး မြေကြီးစား..နှပ်နေနိုင်တော့ .. ဘ၀ကမြေကြီးထဲကကို တိုးထွက်မလာတော့ဘူးလေ..။
လူကျတော့ ..အဖိုနဲ့အမ.. အဲဒီမှာမှ အပြန်အလှန်အုပ်စုဖွဲ့.. အမှီအတွယ်..အတွယ်အတာနဲ့ နေချင်စိတ်ရှိတော့ ..အပြိုင်အဆိုင်..အတိုက်အခံလေးနဲ့.. ဒီခေတ်ဒီအခါအထိ..ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ… ချီတက်လာနိုင်ပြီး.. .. ကမ္ဘာကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်လာတယ်မှတ်ပါတယ်..။ ဒါတောင် လွန်လှ နှစ် ၁၀၀၀၀ ပဲမို့ .. နှစ်သန်းရာချီကမ္ဘာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဒိူင်နိုဆော။ တီရက်စ်တွေ..ရယ်နေသလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်..။
အခုတော့ .. လုပ်စရာတွေလည်း..နည်းလာ..။ ကမ္ဘာကြီးက မြေကြောရှုံ့ ပြီး.. ရွာလိုလည်းဖြစ်လာဆိုတော့… ပိုပြိးတိုးတက်လာအောင်..
အဖို၊အမ အတွဲကနေ.. အဖိုအဖို၊ အမအမ အတွဲတွေအတွက် ဖြစ်လာအောင် သဘာဝတရားက တွန်းတင်လာတယ်မှတ်ပါတယ်…။
လူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့.. လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ… နောင် အနှစ် ၅၀၀-၁၀၀၀ တောက်လျှောက်ဆက်တိုးတက်ဦးမှာပါပဲ..။
ယူအက်စ်ကတော့ .. အခြောက်ဥပဒေတွေတခုပြီးတခု အတည်ပြုနေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတင်.. အခြောက်တွေ ..စစ်မှုထမ်းရာမှာ ..လွတ်လပ်စွာထမ်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့.. Don’t ask, don’t tell (DADT) ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပြီလေ..။
မကြာခင်.. လိင်တူတရားဝင်လက်ထပ်နိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေတန်းစီလာတော့မယ်..။ ၁၀စုနှစ် တခု၂ခုအတွင်း… နိုင်ငံတွေဆင့်ကဲ ကူးသွားတော့မယ်…။
ဆင့်ကဲပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ရဲ့… လူ့ယဉ်ကျေးမှု စီးကြောင်းကြီးပဲ မဟူတ်လားနော..။
နောင်ဆို ..ယောက်ျားလိုချင်ရင်… အခြောက်တွေနဲ့ပြိုင်လုရမယ်..။ ကြိုးစား…ကြိုးစား..အရင်ထက် ၂ဆ ပိုကြိုးစား…။ပဲမများကြနဲ့တော့နော..။
နောင်ဆို..မိန်းမလှလှနဲ့ညားချင်ရင်… လက်စ်ဘီယန်မိန်းမတွေနဲ့ပါ ပြိုင်လုရမယ်..။ ကြိုးစား…ကြိုးစား..အရင်ထက် ၂ဆ ပိုကြိုးစား…။ တတ်နိုင်ရင် ၂ယောက်စလုံးယူပလိုက်…။
ရင်ထုပြီး လင်လုရမယ်ဆိုရင်တော့ …. မယူတော့ဘူး။
နတ်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ နတ်ကို လှမ်းပြီးခြိမ်းခြောက်လိုက်တာဗျာ။
မကြီးလွင်က စိတ်တွေဆိုးပြီး ၀က်သားတွေစားလိုက်မှ သူတို့ဖောက်သည်ရော့သွားမှာစိုးလို့ ဆိုပြီးအချိန်မှီလေး
မင်းကြီးမင်းလေးက ပြန် “မ”လို့ပြန်အဆင်ပြေသွားတာပါတဲ့။
ယိုးဒယားလက်ဝှေ့ ထဲက ..ဂေးက..လက်သံအရမ်းပြောင်တာဗျ..။
ဂျပန်ကို ဖိတ်ပြီး ထိုးတဲ့ပွဲကြည့်ဖူးတယ်..။
ခဏလေးနဲ့ပွဲသိမ်းတာ..။ အရမ်းကို တော်တာ..။
လက်ဝှေ့ မထိုးခင်.. ဗမာတွေလိုပဲ.. လက်ဝှေ့ လုံးပြချိန်မှ ..လှနေတာပဲ..။
လူမျိူးနွယ်တွေမှာ ..ကပြားတွေက .. အစစ်တွေထက်ပိုပြီး ထူးချွန်တတ်တယ်ဆိုကြတယ်..။
ဂေးတွေကလည်း .. အခံစိတ်ကြောင့် ပိုချွန်ကြတယ်ထင်တာပဲ..။
ယူအက်စ်မှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာလူဦးရေးနည်းနည်းလေးထဲမှာတောင်… မြို့ ကြီးအဆင့်မယ်ပြိုင်ပွဲ မစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာဂေးကိုတွေ့ဖူးတယ်..။
အထက်ပါအရာအကြောင်းများ အားလုံးကို ဖတ်ပြီး
ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု သည် သောက်နေတန်းလန်းသော
ဘီယာပုလင်းကို ညာဖက်လက်ဖြင့် ဟန်ပါပါ မြှောက်တင်လိုက်ပြီး စူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေစဉ်တွင်
” ဒီနေ့ တော့ အကြွေးမလုပ်နဲ့ တော့နော် ” ဟု
စိုးရိမ် သံဖြင့် အနားကပ်၍ တိုးတိုးလေးပြောလှာသော
ဆိုင်ပိုင်ရှင် ကျောင်းဆရာအား အောက်ပါအဓိပ္ပါယ်ရသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ခပ်ပြတ်ပြတ်ပင်ပြောလိုက်လေတော့သတည်း။
ခြောက်ရာက ပြန်ပြီး မူလဘ၀ရောက်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးနော် ။ ကြုံထောင့်ကြုံခဲ ပဲ ။
အင်း……..ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ သားယောကျာ်းလေးမွေးလည်း..။ အပေါင်းအသင်းကို ကြောင့် ခြောက်သွားရမှာ လည်းစိုးရိမ်စရာပဲ..။
မိန်ခလေးတွေနဲ့ပေါင်းမှ အခြောက်ဖြစ်တာ ထက် လူငယ်ယောက်ျားလေးခြင်း
လိင်ကိစ္စတွေ ကို အချင်းချင်း စမ်းသပ်တာတွေကြောင့်လည်း အခြောက်ဖြစ်တာတွေ ရှိနေတာတွေ့နေရပါတယ်။..။ လောကကြီးက ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူး…အခုတော့ ရန်ကုန်ေ၇ာ မန္တလေးမှာပါ..အခြောက်တွေတော်တော်များလာတွေ့ရတယ်.။ နောက်အနုပညာလောကမှလည်း ဒီအခြောက်တွေချည်းပဲ…
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဒါတွေကို ဂရုစိုက်ဘို့ လိုလိမ့်မယ်
သူတို့ ဘာသာ လူ့ အခွင့်ရေးတို့ ဘာတို့ ကတော့ သူတို့ ကိစ္စဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်
ဒါတွေက ခေတ်အခြေနေအရ တော်တော်သိမ်မွေ့ တယ်နော်
တော်တော်ကလေးစဉ်းစားစရာဖြစ်ရတယ် ဘာသာရေးအရ ကံအကြောင်းဆိုတာတစ်မျိုးမြင်လို့ ရတယ်
လူမှု့ ရေးအရကတော့ အိုင်ပီ
ပီလိုပြောတဲ့ အတိုင်းဘဲ လူကြီးတွေဘက်က လက်ဦးအောင် ဆော်ပြစ်ရမယ်
မဟုတ်လို့ ကတော့ ညောင်နာနာသွားလုပ်ရင် ကိုယ်ပါရောပြီး ညောင်သွားနိုင်တယ်
တွေ့ ဘူးတယ် နေတဲ့လမ်းထည်းမှာ မိဘတွေက ဘယ်လိုခံစားထားလဲမသိဘူး
သားလေးက ခပ်ချောချော ညောင်နာနာလေးပေါ့
ဒါပေမယ့် လင်ခိုးလာတာလား သူငယ်ချင်းခိုးလာတာလား ဘာလားတော့မသိဘူး
ဘုရားပြောခဲ့ တီထွေးကြီးဆိုတာပဲနေမှာ ~~~~ @_@